Tingabatsirwa Sei neRaibhurari yepaImba yeUmambo?
SARUDZA MUTAURO Abbey Afrikaans Ahanta Aja Akha Albanian Altai Alur Amharic Arabic Arabic (Morocco) Armenian Armenian (West) Assamese Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bembe Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiChangana (Zimbabwe) ChiGhomálá’ ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiItawit ChiKaren (S'gaw) ChiNgiemboon ChiPhimbi ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili ChiYemba Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Comorian (Ngazidja) Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) Esan Estonian Ewe Fang Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Huastec (San Luis Potosi) Huave (San Mateo del Mar) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laotian Lari Latgalian Latvian Lega Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Mano Manyawa Mapudungun Marathi Mari Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mbunda Medumba Mende Meru Mingrelian Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBulgaria Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNepal Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Mutauro Wemasani wokuLatvia Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Nias Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga (Mozambique) Nsenga (Zambia) Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Piaroa Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Pomeranian Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Russian Rutoro Rwandan Sign Language Réunion Creole Saint Lucian Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Thai (Northeastern) Tigrinya Tiv Tlapanec To'abaita Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wixárika Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yapese Yombe Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ungada kuwedzera ruzivo rwako rweBhaibheri here? Unoda here kuwedzera ruzivo rwako nezvemumwe munhu, rugwaro, nzvimbo kana chimwe chinhu chinotaurwa muBhaibheri? Kana kuti wakambofunga kuti Shoko raMwari ringakubatsira here pane imwe nyaya iri kukunetsa? Kana zvakadaro enda unotsvaga mashoko muraibhurari yepaImba yeUmambo.
Unowana zvinhu zvinokubatsira pakutsvakurudza. Zvichida pamabhuku akabudiswa neZvapupu zvaJehovha mumutauro wako pane mamwe ausina. Asi muraibhurari yepaImba yeUmambo munenge muine mabhuku akawanda achangobva kubudiswa. Munogona kunge muinewo maBhaibheri akasiyana-siyana, duramazwi rakanaka, nezvimwewo zvinyorwa zvinobatsira. Unogona kushandisa raibhurari yacho misangano isati yatanga kana kuti yapera. Kana muraibhurari yacho muine kombiyuta, inogona kunge yakaiswa Raibhurari yeWatchtower. Iyi ipurogiramu yepakombiyuta ine zvinyorwa zvedu zvakawanda uye iri nyore kushandisa kana uine nyaya, shoko kana kuti rugwaro rwauri kuda kutsvaga.
Inobatsira vadzidzi vakanyoresa paMusangano weUshumiri Uye Kurarama. Unogona kushandisa raibhurari yepaImba yeUmambo paunenge uchigadzirira hurukuro dzako. Mutariri weMusangano weUshumiri Uye Kurarama ndiye anoona nezveraibhurari yacho. Ndiye ane basa rekuona kuti zvinyorwa zvitsva zvirimo here uye kuti zvakarongedzwa zvakanaka. Mutariri wacho kana kuti munhu anokudzidzisa Bhaibheri anogona kukuratidza kuti ungawana sei mashoko auri kutsvaga. Asi hapana mabhuku anofanira kubudiswa muImba yeUmambo. Tinoda kubata mabhuku iwayo zvakanaka uye hatifaniri kuasvibisa kana kuanyora-nyora.
Bhaibheri rinotiudza kuti kana tichida ‘kuwana ruzivo pamusoro paMwari’ tinofanira kurutsvaga “sepfuma yakavanzwa.” (Zvirevo 2:1-5) Raibhurari yepaImba yeUmambo inogona kukubatsira kuti utange kutsvaga ruzivo rwacho.
Ndezvipi zvinobatsira pakutsvakurudza zviri muraibhurari yepaImba yeUmambo?
Ndiani angakubatsira kuti ugone kushandisa raibhurari yacho?
Kana uchida kuvawo neraibhurari yako, ona kuti ndezvipi zvaungawana pakaunda yemabhuku. Anokudzidzisa Bhaibheri anogona kukubatsira kuona kuti ndeapi mabhuku aungatanga kutora.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Tingabatsirwa Sei neRaibhurari yepaImba yeUmambo?
jl chidzidzo 27